Dardargelinta dadaalka dhallinyarada looga saarayo shaqa-la’aanta - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dardargelinta dadaalka dhallinyarada looga saarayo shaqa-la’aanta
La daabacay tisdag 10 september 2013 kl 15.32
Waxaa la shaqaaleynayaa hawlwadeeno badan dhallinyarada ka gacan ka siiya shaqa-raadinta. Waxaa kaloo kaalmo dhaqaale oo dheeraad ah loo diyaarinayaa dhallinyarada ka hara dugsiyada sare inta aysan dhammaysan. Haddaba si dhallinyaro badani ay shaqooyin u helaan, waxay ku maalgelineysaa lacag gaareysa 100 milyan oo karoon.
Waxaa ahmiyadda koowaad la siinayaa dhallinyarada khatarta ugu sugan in ay shaqa-la’aan waqti dheer galaan, kuwaas oo hadda caawimaad dhaqso ah ka helaya Xafiiska shaqada. Dowladduna waxay sannadkiiba ku bixineysaa 50 milyan karoon si loo shaqaaleeyo hawlwadeeno badan oo gacan siiya dhallinyarada ku sugan xaaladaha adag.
Dhallinyarada badanaaba suuqa shaqada bannaanka ka jooga waxay u badan yihiin dhallinyaro aan haysan shahaado dugsi sare. Sidaas awgeed ayey hadda dowladdu in deeqda dhaqaale lagu kordhiyo bishiiba 7100 karoon oo loogu talagalay ardayda markii dugsiyada ka haray haddase doonaya in ay dib u bilaabaan waxbarashada dugsiga sare. Nidaamkaan deeq-kordhinta waxaa la dhaqangeliyey sannadkii hore. Dowladdu waxay qiyaaseysaa in deeqdaan la kordhiyey ay saameyneyso dad gaaraya 1500 oo qof bishiiba, taas oo noqoneysa kharash dhan 50 milyan karoon.